असाध्यै भाग्यमानी हुन्छन् यस्ता ६ गुण भएका युवतीहरू ! —
शास्त्रमा मानवीय जीवनका पक्ष बारे विभिन्न किसिमका वर्णन गरेको पाइन्छ । हाम्रो समाजमा पनि शास्त्रीय मान्यतालाई अहिले पनि सत्य मानिन्छ । हरेक मान्छेमा छुट्टा छुट्टै गुण, स्वभाव हुन्छन् । समुन्द्र शास्त्रमा शारीरिक अङ्गको बनावट तथा रूप रेखा हेरेर मानिसको भाग्य, स्वभाव र गुणको बारेमा वर्णन गरिएको छ । जसले गर्दा हरेक मान्छेको भाग्य पनि फरक फरक हुन्छ । जसकै आधारमा कुनै व्यक्तिको भविष्यबारे पनि बताइन्छ ।
कालो कपाल भएका र आगाडितिर झुकेको कपाल हुने युवती भाग्यमानी हुने समुद्र शास्त्रमा उल्लेख छ । चिल्लो, कोमल र मुलायम कपाल भएका कन्यालाई उत्तम मानिएको छ ।
गोलो र चिल्लो तथा आकर्षक अनुहार भएका युवती पनि भाग्यमानी हुन्छन् ।
जुन युवतीको शिरको अगाडीको भाग उठेको छ त्यस्ता युवती धनी र वैभवशाली हुने मानिन्छ ।
सिन्दुर लगाउने स्थान सिधा र उठेको छ भने त्यस्ता युवती पनि भाग्यवती मानिन्छन् ।
आँखीभौं जोडिएका युवतीलाई विश्वास गर्न नसकिने समुन्द्र शास्त्रको भनाइ छ । आँखीभौं धनुष जस्तै झुकेको भए यस्ता युवतीलाई भाग्यमानी मानिन्छ ।
यो पनीः यि पाँच राशि भएका ब्यक्तीहरू जस्ले कहिले हार मान्दैनन् । बदल्छन् आफ्नो भाग्य हेर्नुहोस !
शास्त्रका अनुसार सबै गरी राशिहरू १२ वटा मात्र हुन्छन् । विश्वमा रहेका सम्पूर्ण मानिसहरूको राशि अनुसार उनीहरूको भाग्य, क्षमता र व्यवहार फरक फरक हुने गर्दछ । त्यसैमा पनि कोहीको बौधिक क्षमता धेरै हुन्छ भने कसैको कम पनि हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक फरक राशिका व्यक्तिमा व्यवहार, भाग्य फरक हुन्छ ।केही यस्ता ५ राशिहरू छन् जुन राशि भएका मानिस जीवनमा कहिले हार मान्दैनन् । उनिहरू आफ्नो जीवन बाट कहिले पनि हार खादैनन् र आफ्नो लक्षको लागी कडा मिहेनत गर्ने गर्दछन् । हेरौँ उक्त पाँच राशि तल